We She Me: နိုင်ငံခြားကို အထင်မကြီးသူများ
ဇနိ - 11/18/08, 11:27 PM
MrDBA - 11/19/08, 1:08 AM
ကိုအန်ဒီရေ .. အဖိုးတန်လိုက်တာဗျာ။ နောက်လဲကြုံရင် ရေးပါဦး။
survive ဆိုတာတွေတွေ့နေလို့ Wall-E ထဲကလိုပြောလိုက်ဦးမယ်။
I don't want to survive, I want to live. :P
nu-san - 11/19/08, 1:45 AM
Andy ရေ.. အားလုံးကို ယှဉ်ပြီးရေးပြသွားတာ အတော်ကောင်းတယ်.. ဘယ်နေရာမှာ နေရမှ ကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူး မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့နေရာနဲ့ သူ အားနည်းချက် အားသာချက် တော့ ရှိတာပဲနော်။
Bagyi - 11/19/08, 2:09 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..မှတ်သားစရာပါပဲ.. ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေ အဆင်ပြေဖို့အဓိကပေါ့.. မဟုတ်ရင်..ဒီမှာနေ ဟိုကို မျှော် နဲ့ ..
Ko Paw - 11/19/08, 2:29 AM
ကျနော်တော့ ရန်ကုန်မှာ ၆ လလောက်လုပ်ဘူးတယ်။
မလေးရှားမှာ ၂ နှစ်ခွဲလောက် လုပ်ဘူးတယ်။
စင်္ကာပူမှာ ဆယ်နှစ်ကျော် လုပ်ဘူးတယ်။ (နည်းနည်းထည့်ကြွားရရင် သြော်ဇီနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ကိုလည်း ခေတ္တခဏရောက်ဘူးတယ်....ညှင်းညှင်း။)
မလေးရှားမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တုန်းက လစာနည်းနည်းလေးရပေမယ့် အရမ်းပျော်တယ်။ ပျော်ရွှင်ရခြင်း အကြောင်းရင်းတွေကတော့ အများကြီးပါ။ အဲသည်လောက် ကြာကြာနေဖူးမှ သိမှာပါ။ ဒီမှာတော့ ပြောပြမနေတော့ပါဘူး။
ကျနော်ကတော့ စင်္ကာပူကို မကြိုက်ပေမယ့်လည်း မခွာနိုင်သေးပါဘူး။ တခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်ကြည်ညိုလှတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာ အနီးကပ်ပြုစုချင်လို့ပါ...ခွိခွိ။
PAUK - 11/19/08, 2:34 AM
ksanchaung - 11/19/08, 3:24 AM
အိမ်း။ (တကယ်။ အဟုတ်။ အတည်ပြောမည်။) ဘယ်ကိုမှလည်း ဟုတ်တိပတ်တိ မရောက်ဖူးတဲ့ သူဆိုတော့ ဆရာကြီးတွေရဲ့ “ပဏ္ဍိတာနင်းစ”ဒဏ်တွေကိုပဲ ကျေကျေနပ်နပ် ခံယူရင်းနဲ့ ဟောဒီ့ကသားသားလေး တပည့်ခံပါရစေ ခင်ည။
Moe Cho Thinn - 11/19/08, 3:28 AM
တကယ်က အထင်ကြီးတာ၊ အထင်သေးတာ၊ လခနည်းတာ၊ လခများတာတွေဟာ ပညတ်ချက်တွေ၊ လူက လုပ်တာတွေပါ။ ကိုယ်မြင်တဲ့ ထောင့်က ကြည့်ပုံ ကွဲသွားတာ၊ ကိုယ်ခံစားရတဲ့ အတွေ့အကြုံပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကောင်းတယ် မကောင်းဘူး ဖြစ်သွားရတာတွေပါနော်။
အမတို့က ဧည့်သည်ပါပဲ။ လာလည်တုန်းခဏ အိမ်လေးကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြင်ထားရင် သက်တောင့်သက်သာရှိလို့ နေပျော်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အချိန်တန်ရင်တော့ အိမ်ပြန်မှာပဲလေ။ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ နေချင်၊ သေချင်တာပါပဲ။
JulyDream - 11/19/08, 3:32 AM
အခုမှပဲ ရှင်းသွားတော့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စလုံးမှာ နေပျော်အောင် နေလိုက်အုံးမယ်။ ဘယ်မှသွားဖို့လဲ အစီအစဉ် မရှိသေးပါဘူး။ အခွင့်အရေးရရင် ရသလို မြန်မာပြည်ပဲ ပြန်ချင်နေတာ။ အခု လောလောဆယ်မှာ မြန်မာပြည် ပြန်သွားရင် ဘာမှ လုပ်စရာ မရှိလို့ မပြန်ဖြစ်သေးတာပါ။
Taungoo - 11/19/08, 3:33 AM
အစအဆုံးဖတ်ပြီး ဒီလိုလေးတွေ ဖြစ်သွားတယ် ကိုအန်ဒီ။
သြော် ဒီလိုလဲ ရှိသေးတာကိုး။
ခုမှ ဒါကိုသိတယ် ကြည့်စမ်း။
ဒါ ကောင်းသားပဲ။ စသဖြင့်.....
“ကိုယ်ထင်ရင် ကုတင် ရွှေနန်းပါပဲ”
pandora - 11/19/08, 3:43 AM
ငယ်တုန်းထွက်လာပြီး စိတ်ကျေနပ်လောက်အောင် explore လုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ ထင်ပါတယ်။
မီယာ - 11/19/08, 5:52 AM
ကိုယ်တို့လင်မယားကစင်ကာပူဖူးစာပါ။ နှစ်ယောက်လုံးပညာလဲသင် အလုပ်လည်းကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ယောကျာ်းကဘယ်လိုမှ စင်ကာပူပြန်သွားခိုင်းလို့မရပါဘူး။ သူ့အဆိုကတော့ဥရောပက laid back life style တဲ့။ စင်ကာပူလို stressful မဖြစ်ဘူးတဲ့။ ကိုယ်ကတော့ country road တွေတမျှော်တခေါ်လျှောက်ရတာကို shopping mall တွေနဲ့မလဲနိုင်ဘူး။ technology လုံခြုံရေးနဲ့သန့်ရှင်းရေးမှာတော့စင်ကာပူက အများကြီးသာပါတယ်။ ည၁၂နာရီထိုးမှလည်း MRT စီးပြီးတစ်ယောက်ထဲပြန်လာရဲတယ်။ ဒီမှာတော့ ညနေမိုးချုပ်ရင်တစ်ယောက်ထဲလမ်းလျှောက်ဖို့ မစွန့်စားဝံ့ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မိသားစုကိုတော့ အရမ်းလွမ်းတယ်။
Anonymous - 11/19/08, 6:18 AM
Impressive post indeed. I think Singapore isagood stepping stone for Burmese and if that door were closed, there will be less opportunity for Burmese. The compensation (even in post tax absolute terms), opportunities (job and quality of higher education) and quality of life (food, housing, communication, transportation, leisure) is better than half of the Western European nations. I do not want the gates of lion city become closed because of vested interest ofafew Burmese who are fighting other people's war.
Anonymous - 11/19/08, 6:33 AM
as it is hard to get employee job (easier to get in Singapore). A post doctoral research fellow in UK universities makes less than 20,000 Pounds and there who are complaining about Singapore should travel to UK, Europe and Australia first and live there for weeks and listen to immigrant experience there. Grass is greener somewhere but Singapore isagood starting place. Do not make your actions shut doors for others.
Nu Thwe - 11/19/08, 9:53 AM
အထက်က ပြောသွားတာလေးကို နည်းနည်း ဆက်မယ်နော်။
ခု ယူကေက EU (European Union) နိုင်ငံသားတွေကို လွတ်လပ်စွာ လာရောက် အလုပ်လုပ်ခွင့် ပေးရတယ်။ သူတို့မှာ ဗီဇာ ကန့်သတ်ချက် မရှိဘူး။ မြန်မာနဲ့ တခြားနိုင်ငံသားတွေ မယှဉ်နိုင်တဲ့ အားသာချက်ပါပဲ။ စီးပွါးကျချိန်မှာ အလုပ်အကိုင် ပိုခက်လာတယ်လို့ ညီမလေးတွေ ညည်းနေကြတယ်။ ဆရာဝန်တွေကိုလည်း ပြည်တွင်း ဆေးတက္ကသိုလ်တွေက နိုင်အောင် ထုတ်နိုင်လာလို့ အပြင်ကလူတွေကို ဗီဇာနဲ့ ထိန်းချုပ်လိုက်တာ နှစ်နှစ်လောက် ရှိပြီ။ နောက်တစ်ကျော့ လူလိုရင်တော့ ဖွင့်ကောင်းပြန်ဖွင့်မလား မပြောတတ်ဘူး။ ခုလောလောဆယ်တော့ အသစ်လာမယ့် သူတွေအတွက် ခက်ခဲတာ အမှန်ပဲ။
ဒီက ဘရစ်တွေကတော့ သြော်ဇီကို တော်တော် ကြိုက်ကြတယ်။ lifestyle နဲ့ weather ကို အဓိကပေါ့။ ပြောင်းပြေးသူတွေ အများကြီးပဲ။ New Zealand ကိုလည်း တော်တော် နှစ်သက်ကြတာ ကြားဖူးတာပဲ။
ကိုယ့်သဘောကတော့ ရောက်တဲ့အရပ်မှာ ကိုယ့် potential ရှိသလောက် ဖြစ်ထွန်းအောင်၊ ကြိုးစားပြီး ရေတွင်းတူးကြရမှာပဲ။ ရေကောင်းကောင်း ထွက်ရင်တော့ ဘယ်တွင်းပဲဖြစ်ဖြစ် မပစ်သင့်ဘူး၊ အသစ်မရှာသင့်ဘူး ထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်တွင်း ထပ်တူးဖို့ ဆိုတာက အချိန်တွေ၊ အင်အားတွေ လိုသေးတယ်လေ။ သတ္တိ သိပ်ကောင်းသူများကို မဆိုလိုပါဘူး။ နှစ်ဆယ်ကျော်ဆိုရင်လည်း တစ်မျိုးပေါ့။
ကမ္ဘာကြီးကို မြင်ဖူးတာ ကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံပါ။ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်တိုင်းပြည် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာတော့ အားလုံး သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကလည်း ကိုယ် သိခဲ့တဲ့၊ ကိုယ် ပျော်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတော့ မဟုတ်တော့ဘူးရယ်။
Anonymous - 11/19/08, 10:29 AM
Elsewhere in Europe, for example in Spain, Italy (southern parts), Portugal, Greek and everywhere in Eastern Europe, pay is less than Singapore (in absolute terms, even before tax). I hope you getapicture by now. NZ is not very nice as I met more than NZ PR working in Singapore who studied in NZ graduate schools and came to work in Singapore while paying mortgage in Auckland.
Anonymous - 11/19/08, 12:19 PM
နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်နေတဲ့ လူတိုင်းက အခက်အခဲတွေ ရုန်းကန်ရတာတွေ မပြောပြတတ်ဘူး။ အဆင်ပြေ တာကိုပဲ ကြွားတတ်ကြတာ များတယ်။ အဲဒီတော့ မသိတဲ့ လူတွေကလည်း သွားချင်ကြတယ်။ ဥပမာ UK ကို Student Visa ယူပြီး ရောက်နေတဲ့ လူတွေက ဟိုမှာ ဘယ်လိုကျောင်းတက်ကြောင်း အချိန်ပိုင်း အလုပ်လုပ်တာ ဘယ်လောက် ရကြောင်းတွေပဲ ပြောတယ်။ တကယ်တော့ အချိန်ပိုင်း အလုပ်လေး လုပ်ရဘို့ agent ရုံးရှေ့မှာ မနက်တိုင်း သွားတန်းစီရတာတွေ လူပြည့် သွားလို့ မလုပ်ရပဲ ပြန်လာရတာတွေ ဟော်တယ်မှာ စားပွဲထိုး လုပ်ရတာတွေ ပန်းကန်ဆေးရတာတွေ ပေါင်မုန့်ဆိုင်မှာ မုံဖုတ်ရတာတွေ ဒီဗွီဒီ အခွေတွေကို ဘူးထဲ တစ်နေကုန် မတ်တတ်ရပ်ပြီး ထည့်ရတာတွေ ပြန်မပြောပြတတ်ဘူး။ ပညာတတ် သူငယ်ချင်းတွေ အဲဒါမျိုးတွေ လုပ်နေတာ မြင်ရရင် စိတ်မကောင်းဘူး။ တစ်ချို့တွေကတော့ အလုပ်လုပ်ရင်း ကျောင်းတက် မယ်ဆိုပေမယ့် ကျောင်း စရိတ် ကြီးတာကြောင့် အဲဒီ odd job အလုပ်တွေမှာပဲ နစ်ပြီး ပိုက်ဆံရှာ နေကြ ရတယ်။ တကယ်ကတော့ ကိုယ်အဆင်ပြေနေတဲ့ နေရာက ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
shin - 11/19/08, 1:13 PM
I gotalot of new idea/knowledge from this post! Thanks, ko Andy!
And those comment also tell me the situation of different country also!
MANORHARY - 11/19/08, 1:29 PM
ကိုနေ - 11/19/08, 2:22 PM
ဒီလိုပါပဲ ကိုယ်အိမ်မှ မဟုတ်ပဲလေနော့်...
ကျနော်က စင်္ကာပူ ကိုစရောက်ကာစက ကြိုက်ပါတယ်....
လည်စရာ ကုန်သွားလို့ ပါ :P
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် စလုံးမှာ မနေချင်တော့ပါဘူး .......
Loi Lem - 11/19/08, 2:50 PM
KPZ - 11/19/08, 4:23 PM
စီကာစဉ်ကာ ပူပင်နေရတုန်းပါပဲ အကိုရာ။ ဒါပေမယ့် ပျော်ရာမနေ. တော်ရာ နေနေရအုံးမှာပါပဲ :(
Anonymous - 11/20/08, 5:42 AM
burmesegoldbull - 11/20/08, 6:18 AM
i guess some ppl really believe in utopia. they thought they have interested in politics and don’t like sg because of its political nature.. i believe, wat they r displaying justareflection of their hatred towards authority deep inside their unconscious mind, without understanding of the nature of politics.
as anonymous said, they r fighting other ppl wars...
Winkabar - 11/20/08, 10:42 AM
ဖတ်ပြီးရယ်တောင်ရယ်ချင်သွားတယ်။ ဒီလိုပါပဲနော် လူတွေကတော့။ ကိုယ်နေတဲ့နေရာကိုတော့ ကောင်းတယ်ပြောမှာပေါ့ ဒါမှလည်း သူများနေတဲ့နေရာကိုမသွားရပဲနဲ့ ကိုယ်နေရတဲ့နေရမှာပျော်မှာကိုး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ နိုင်ငံခြားမှာနေရတဲ့လူတွေကတော့ အနည်းနဲ့အများအထီးကျန်ကြတာပါပဲ။ စင်ကာပူကလူတွေကိုတော့အားကျတယ်။ မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းများလို့။ ကိုအန်ဒီပြောသလိုပေါ့ အနာဂတ် မြန်မာပြည်လေးမှာ နေရသလိုမျိုးလေးလိုဆိုတော့။
တက်တူ - 11/20/08, 5:00 PM
Now i live in Sg and i have some experience in IT field. Could u tell me some agent address or web for US H1 visa?
Anonymous - 11/21/08, 6:31 AM
For those who forget where Singapore came from and how far it has progressed to be where it is today, I will quote fromabook I have been reading this week.
The Meaning of the 21st Century:
a Vital Blueprint for Ensuring Our Future:
Anonymous - 11/23/08, 4:08 AM
အော်ဇီ က ပိုကောင်းတာပေါ့ (ပြောကြတာပဲ)
Anonymous - 11/23/08, 3:02 PM
It's notagood time to move to US right now.Maybe in5years time!
Anonymous - 11/23/08, 5:52 PM
The essence of democracy very much depends on people who are "defining" the very word. Therefore, it might differ from country to country catering to different cultures and practices. What matters most is that there is peace,prosperity and thriving in the nation. We need to have food on the table especially in these difficult times of global recession. Would "freedom of speech" and other things matter?
Anonymous for Anonymous - 11/24/08, 1:19 PM
Aye Myat Myat Ko - 12/1/08, 1:04 AM
mynativeland - 12/2/08, 10:40 PM
ပျော်ရာမှာမနေ တော်ရာမှာနေ ဆိုတဲ့စကားလိုပေါ့ တော်ရာမှာပဲ ပျော်အောင်ကြိုးစားနေရတာပေါဗျာ။ စလုံးကစက်ရုပ် မျက်နှာကြီးတွေကို မကြည့်ချင်လည်း ကြည့်နေရဦးမှာပဲလေ။ ခုလောလောဆယ်တော့ Annual Leave နှစ်ပတ် မယူရင် ကိုယ့်အလုပ်ကပေးမဲ့ အပိုငွေဒေါ်လာကို မယူတော့ပဲ မွေးရပ်မြေပြန်ပြီး အဖေ၊အမေ မျက်နှာလေး ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ တချိန်ချိန်တော့ ကိုအန်ဒီ ပြောတဲ့ နောက်နှစ်သုံးဆယ် ပုံစံမြန်မြန်ရောက်အောင် ကျွန်တော်တို့အားလုံး အိမ်ပြန်ကြစို့လား.......
Anonymous - 12/5/08, 7:32 PM
သူပြောတဲ့ထဲ မှာ SMU ဆိုတာကြီးပါသွားတယ် ... ဘာလည်းလခကောင်း သလို ရာထူးမြင့်မြင့်ရသလို...
တကယ်တော့ ကျွန်တော်က အဲဒီကျောင်းမှာ နောက်ဆုံးနှစ်တောင်ရောက်နေပါပြီ။ ရှေ့ကလူတွေကိုကြည့်ပြီ ရင်ခုန်နေတာပါ။.. အဲ...ပြီအောင်ဖတ်နော..... လခကောင်းတာတွေ ၊ ရာထူးမြင့်တာတွေ ဟုတ်ဘူး..... ... အလုပ်မှရပမလားလို့ .... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူနိုင်ငံသား စင်္ကာပူရမ်းဆိုတဲ့ ကောင်တွေတောင်မှ အလုပ်နဲ့ ရတဲ့ဘွဲ့ နဲ့ မကိုက်လို့ ပါပဲ.... ဖတ်တဲ့ ဘာသာလည်းကွာသေးတယ်.... ဥပမာ... social science ဆိုတာကြီးကို ဖတ်လို့ကတော့ SMU က marketing လုပ်ရင် 100 % အလုပ်ရတယ်လို့ ပြောလို့ရအောင် ကျောင်းမှာပဲ admi အလုပ်ပေးတာတွေရှိတယ် (လူတွေမသိတာပါ။ အတွင်းသတင်းပေါ့) မြန်မာတွေတော့ social sceince မှာ မရှိပါဘူး။ စင်္ကာပူရမ်းမမလေးတွေ ဘွဲ့ မရခင် ရင်ဖွင့်သွားလို့ပါ။ ဟီးဟီး တမျိုးမထင်နဲ့ ... project လုပ်ရင် ရင်ဖွင့်သွားတာမျိုးပါ။
ရှင်းရှင်းပြောရင် စင်္ကာပူဆိုတာကြီးကို ဥာဏ်ရှိသူတိုင်းချစ်ကြပါဘူး.. သူ့တို စင်္ကာပူရမ်းဆိုတာကိုက ဒီလိုပြောတာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူနေမှုစရိတ်ကြီးပြီး ၊ ငွေရှာရခက်လို့ပါပဲ။
မြန်မာတွေကတော့ ကြိုက်ကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်နဲ့ သွားသွားယှဉ်တာကို။ မယှဉ်မိတဲ့ တစ်နေ့ မှာ ချစ်သေးလာလို့ မေးချင်ပါတယ်..........
Anonymous - 2/23/09, 10:18 PM
By the way, when I first came here, I did not have any friends or family in Aus, which makes meageneration 1.0 by theory. I studied2years, gotajob, got PR, becameacitizen. I then tried out for medical school admission and got in. (a little bit showing off) Which version of generation do I fit in at this point, Ko Andy? :D
yangonthu - 2/24/09, 8:32 PM
Anonymous - 2/27/09, 4:25 AM
yes..4years med schools cost around USD 200,000.. And they can't even directly go to med school with their K-12 education unlike some Europe countries, SG or Myanmar..
They need an undergraduate degree with pre-med courses.. (an undegrad degree is also required for Vet and Law Schools)
Then they can attend4years med school and about3years of internship.. Also they need to take exam for licence which allowed only two times in their entire life.. (they need to take in their 1st or 2nd year of intern.. not sure about it)..
So typicallyaUS doc spends average 13 years after their K-12 to becomearegistered GP..
yangonthu - 2/27/09, 10:05 AM
yangonthu - 2/27/09, 10:09 AM
Anonymous - 2/27/09, 1:55 PM
What Do U Expect Much..In Other People' Country...
yangonthu - 2/27/09, 7:14 PM
Hi Ko Andy, the first post in regards to med school (posted as Anonymous on 2/23/09 10:18 PM) was posted by me as well. At that time, I tried to post it with 'yangonthu' name but it came back with an error and therefore was posted as Anonymous (I thoughtauser named yangonthu already exists and hence I was too lazy to think of another name :D)
Forgive me if I confused anyone.
Andy Myint - 3/2/09, 11:02 AM
No worries, Ma Yangon Thu. I really appreciate your contribution. BTW, you are generation 1 + 1.2 :) Asafirst comer we are not Gen 2.x .. but you really are more than what 2G are. Good on you. Cheers!
yangonthu - 3/3/09, 7:21 PM
Generation version ကိုမေးတာနောက်တာပါ.
It’s quite impractical to compare myself with the ones who were born and grew up here. I might be able to level up in some areas like in academic or at work place but not in all, especially in social networks.
By the way, I do enjoy reading your posts; keep up the good work.
JPS - 8/20/09, 6:23 PM
For me is different. I come out from Yangon because I cannot stand there with my salary. I want to give my parents but I cannot. So really disappointed myself and try to come out. Now I work here and then try to happy. Only one thing is so difficult for me that is the time while I missed my home. Really want to throw everything and go back home at that time. But cannot do it because of the same reasons. Now I decided to continue my education and then I will move another one. :(
မောင်မောင် - 7/11/10, 7:35 PM
အမြင်အမျိုးမျိုး ရှု့ ထောင့်အမျိုးမျိုး ကို အတော်ဖတ်ယူရပါတယ်။ ပြီးတော့
ဗဟုသုတ လဲ အများကြီး ရပါတယ်။ အခုလို ပိုစ့် လေး ရေးပေးတာ ကို
အခုလောလောဆယ် ကျွန်တော် ကတော့ ကဘူးမြို့ မှာ ရောက်နေပါတယ်။
ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ( ပြောင်းရွှေ့ လုပ်ကိုင်) တာပြောပါတယ်။
အခိုက်အတန့် သာ နေမှာမို့ လို့ရောက်တဲ့ အရပ်မှာ တော့ ပျော်အောင်နေရပါတယ်ဗျာ။
gyidaw - 7/12/10, 11:53 PM
Dear Andy Thank u for the post.Everybody has own reason.YOU ALWAYS WRITE N SHARE WITH WHITE HEART.It depends on the person n condition who absorbe what they want.
netclient - 7/13/10, 7:47 AM
America especially NYC is the best place to find jobs, I mean Off-jobs, its better to find permanent jobs in other state area, If lucky u can get the job in Local City area also.
Many people get student visas and try to come U.S.
They try about colleges, universities, and some ESL class along with professional courses.
Anonymous - 7/14/10, 1:01 PM
ပျော်ရာ မှာ မနေရ တော်ရာမှာ နေရ ဆိုသလိုပါပဲ။ ညီမလေး နဲ့ အမြဲတမ်း ပြောဖြစ်တယ် Singapore က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၁၅ခုမြောက် ပြည်နယ်လို့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ရထားတာ =)
Anonymous - 2/13/11, 10:24 PM
အမေရိကားအကြောင်းကို စင်ကာပူကနေ..အမေရိကားေူပာင်းသွားတဲ့ ကိုသြူကီးရေးထားတဲ့ ဘလော့ ရှိတယ်လေဗျ။ ကိုအန်ဒီ နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေတောင်ူဖစ်ချင်ူဖစ်နေမှာ။